China Fambolena saka fako, fanamboarana sy orinasa | Bondhot
Tofu cat Litter vita amin'ny akora ara-tsakafo, dregs tsaramaso ho fitaovana lehibe, afangaro amin'ny vovon-katsaka, miendrika tsanganana, kely lalana ary tongotra tsara ho an'ny biby.
Tsiro madio ho an'ny deodorization tsara, tsy misy poizina, tsy misy vovoka, entina haingana, clumps haingana kokoa ary mafy kokoa, voadona sy azo alefa ao anaty trano fidiovana ary azo alaina ao anatin'ny 15 segondra, tsy misy asa fanary fako. Karazana fako tia tontolo iainana vaovao indrindra amin'ny tontolo iainana ankehitriny.
Anaran'ny vokatra Mpanamboatra Soy Cat Litter tia namana ara-tontolo iainanaTofu Kitty Litter Multi Scents Original, Apple, voasarimakirana, lavenona, dite maitso na namboarina
Marika OEM Akora fototra Voalobaky ny salohim-bary, lafarinina soja, lafarinina katsaka, siligaoma Guar
Fampiasana Toliet saka Endrika Granule & Solid & Colimnar & Strip
Diameter 2mm Halava 4-12 mm
Fitsapana SGS Tsy misy formaldehyde & Aspergillus Flavus & Bakteria & vy mavesatra hita, voasedra am-bava tsy misy poizina Toetoetra Scooping mora, Agglomeration haingana, voajanahary voajanahary, mora azo, hypoallergenic, fifehezana fofona maimbo
Density 0,65 - 0,7g / ml Sitroka rano > 600%
Fanoherana voafintina (g) > 400g Toerana niandohana Faritanin'i Shandong, Sina
Additives sentetika Tsy tafiditra Simika Tsy tafiditra
Tombony Mpanintona be, Super Deodorization Vata fitaterana saka mety Boaty Fama-saka iray sosona tokana
Ora nanomezana 15 andro ho an'ny Marika; 20 ~ 30 andro ho an'ny OEM & ODM Kaody HS 23031000
Karazan-kitapo 6L na 7L sy 18L na namboarina Fonosana Kitapo + boaty anatiny + baoritra Master
A: Izahay dia orinasa mivantana ary afaka manondrana irery izahay.
F2: Inona avy ireo tanjaka anananao?
A: Manana traikefa fanondranana betsaka izahay; Vokatra avo lenta; Fitaovana maharitra sy tontolo iainana mahasoa; Vidin'ny orinasa mifaninana; Mekanisme fanamarinana kalitao henjana; Serivisy aorian'ny fivarotana.
F3: Afaka mahazo santionany ve aho ary maimaim-poana?
A: Haverina aminao ny sarany santionany rehefa mametraka kaomandy lehibe ianao.
F4: Azo atao fifampiraharahana ve ny habetsahana farafahakeliny sy ny fotoana fitarihana?
A: Ie. Ny habetsaky ny MOQ ambany dia azo ifampiraharahana amin'ny fepetra sasany; Mety mila fotoana mitarika lava kokoa ho an'ny santionany manokana koa isika. Azafady mba ampahafantaro anay ny filazalazana sy ny olana atrehinao, ary hiezaka izahay hamorona vahaolana mety.
F5: Inona ny fomba fandefasana?
A: Araka ny fitakianao dia afaka misafidy ireo mpanome serivisy fandefasana entana samihafa, toy ny FEDEX, DHL, TNT sns. amin'ny rivotra na an-dranomasina. Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny làlan'ny fandefasana, ny lanjan'ny vokatra sy ny habetsany ary ny toerana misy ny faritra misy anao. Rehefa avy nanatitra entana izahay, dia halefanay avy hatrany ny laharana fanarahan-dia, mba hahafahanao manara-maso ny entanao ara-potoana.
F6: Inona no fihodinanan'ny fotoana?
A: matetika ny entanay dia alefa ao anatin'ny 7-14 andro. Mety hitranga ny fahatarana noho ny toe-javatra tsy ampoizina.
F7: Inona ny fomba fandoavam-bola?
A: Manohana ny fomba fandoavam-bola miovaova izahay, tsara kokoa amin'ny T / T.
F8: Azonay atao pirinty va ny marika na sary famantarana anay amin'ny vokatrao?
A: Marina tokoa. Ho fahafinaretanay ny ho mpanamboatra ODM sy OEM tianao any Shina.
F9: Fa maninona ny entana sasany no tsy mitovy amin'ny sary an-tranonkala sy ny zavatra azo ampiharina?
A: Noho ny tsy fitovian'ny jiro sy ny mpizaha amin'ny efijery dia ny sary ihany no ampiasaina. Anisan'ireo andiany samihafa, mety tsy hitovy kely ihany koa ny fitaovana.
Teo aloha: Pads puppy
Manaraka: fasika saka